'Xildhibaano ayaa xiriir la leh Al Shabaab'
21 Apr 21, 2010 - 8:33:07 AM
Gudoomiyaha Baarlamaanka DF Sh. Aadan Max'ed Nuur [Madoobe] oo maanta [April 21] shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa gaashaanka ku dhuftay mooshinka laga diyaariyay isagoo sheegay inuu yahay gudoomiyaha xaqa ah ee Baarlamaanka.
"Xildhibaanada wada qorshahan waa kuwo doonaya inay burbur u horseedaan DF si ay kooxaha dowlada kasoo horjeeda ugu noqoto fursad" ayuu yiri Sh. Aadan Madoobe isagoo sheegay in qaar ka mid ah xubnahan uu sheegay inay xiriir la leeyihiin Ururka Al-shabaab.
"Gudoomiyaha Baarlamaanku waa aniga, waana haynayaa xilkan inta howsha guud ee baarlamaanka ay ka dhamaanayso" ayuu yiri Sh. Aadan Madoobe oo ku sugnaa Golaha Shacabka halkaasoo lagu wado inay ka furmaan fadhiyada baarlamaanka.
Maalinta beri ah oo ku aadan xiligii loo qabtay inay furmaan fadhiyada baarlamaanka ayuu sheegay Sh. Aadan Madoobe inay jiraan weli howlo farsamo oo u dhiman halka uu shirku ku qasoomi lahaa, wuxuuse sheegay inay ku adkeysanayaan inuu kulanku furmo.
Sh. Aadan Madoobe wuxuu sheegay inuusan xilka isku dhajiyay, balse dacwooyinka loo qabo loo maro sharciga dalka u dagsan iyo kan baarlamaanka, isagoo sheegay in koox fowdo wadayaal ah uusan hadalkooda uga tagayn xilka uu u hayo ummadda.
"Shacabka Soomaaliyeed hadii ay iga dalbadaan inaan xilkayga ka dago waan ka dagayaa, anigoo u daneynaya shacbka, balse si kale ugama tagayo shaqadayda" ayuu yiri Sh. Aadan Madoobe.
Ugu dambeyn gudoomiyaha Baarlamaanku wuxuu sheegay in cid walba oo sharci wadata uu doonayo inay yimaadaan baarlamaanka, balse aan laga qaylin hoteelada iyo goobaha kale ee aan munaasabka ahayn.